Ralph Lauren ga-agbanwe atụmatụ Ecommerce ya iji melite ahịa | ECommerce ozi ọma
Ralph Lauren ga-agbanwe usoro Ecommerce ya iji melite ahịa
Ralph Lauren kwuputara n'oge na-adịbeghị anya na ọ ga-agbanwe usoro e-commerce ya, nke o kpebiri ịkwaga Ahịa ahia ahia site na ahaziri iche. Companylọ ọrụ a ma ama ama ama agbalịrị iru ihe mgbaru ọsọ ego ya n'etiti nsogbu ngwongwo maka obere ụlọ ole na ole gara aga.
1 Mechie ụlọ ahịa flagship ya na New York
2 New Ecommerce n'elu ikpo okwu
Mechie ụlọ ahịa flagship ya na New York
Nzube Ecommerce ohuru nke Ralph Lauren gụnyere mmechi nke ụlọ ahịa ọkọlọtọ ya dị na 711 Fifth Avenue na New York City. Companylọ ọrụ ahụ gosikwara na ọ ga-ejikọ ọrụ niile yana ụlọ ahịa asaa ya nke ọ kesara n'obodo niile.
Na nke a Ralph Lauren chọrọ ịchekwa $ 140 nde na mmefu kwa afọ nke ahụ ga - enyere gị aka itinye ego itinye ego ọzọ. Nke a ego bụ na mgbakwunye na nke na mbụ mara ọkwa ego nke $ 18 nde ka $ 220 nde kwa afọ.
Dị ka ndị ọzọ ndị na-ere ahịa na ụlọ ahịa akwa, Ralph Lauren enweela ọtụtụ nsogbu dị ka uwe ejiji ngwa ngwa, azụmahịa e-commerce, na akụnụba. N’ọnwa June itinye ego, ụlọ ọrụ ahụ gosipụtara atụmatụ akpọrọ "Wardzọ n'ihu", nke na-ezube imezi Ecommerce nke oge a, n'otu ụdị ahụ nke ga-eme ka ọrụ dịkwuo mma.
Na akụkọ kwa afọ nke 2016, ụlọ ọrụ ahụ kwupụtara na ọ na-akwaga na atụ SAP zuru ụwa ọnụ, nke ga-ahụ maka ikpuchi arụmọrụ na ahịa US, na-enye atụmatụ dịka inweta ịkwụ ụgwọ na imeghari ngwa ngwa.
New Ecommerce n'elu ikpo okwu
Ralph Lauren kwukwara na ha nọ n'usoro iwulite ikpo okwu Ecommerce zuru ụwa ọnụ, nke bụ akụkụ nke atụmatụ gị iji melite ahịa gị na ike gị niile. A na-atụ anya ịmalite ụlọ ọrụ e-commerce ọhụrụ a na 2018.
Ihe niile na-egosi na ụlọ ọrụ ahụ enweghị ike ịhapụ ka afọ ọzọ gafee iji wuo usoro Ecommerce a. Ffpụtala ya ikwu na nkeji iri na ise gara aga, Ralph Lauren kwuru na ire ere na ụlọ ahịa Ecommerce ha dara 10%, ebe ahịa n'ụlọ ahịa anụ ahụ ha dara 3%.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » eCommerce » Ralph Lauren ga-agbanwe usoro Ecommerce ya iji melite ahịa
Na-ere ndụmọdụ maka Ecommerce gị